Amagumbi asimahla okuxoxa ngePsychic - Ingxoxo Iigumbi Kwi Intanethi
Uninzi lwamagumbi okuncokola ngengqondo anobuhlobo kwaye avulelekile ukuba athethe ngazo naziphi na izixhobo kunye neemveliso zokomoya. Kumagumbi okuxoxa ngengqondo, uyakufumana oosiyazi abaqeqeshiweyo kunye nabaqeqeshelwa umsebenzi, kunye nabo baqala ukufunda kunye nabo banomdla kuphela. Nangona kunjalo, amagumbi okuncokola ngengqondo anokuba ngabantu abafuna ukufundwa.
Amagumbi Okuncokola Esidlangalaleni
Zininzi iindawo zokuncokola zengqondo ezikwi-Intanethi ezisimahla. La angezantsi aquka amanye amalungu abhalisiweyo kwiingxoxo; ayinguwe wedwa kunye noosiyazi njengoko bekuya kuba kwigumbi labucala, ke nabani na apho uyayazi incoko yakho. Amagumbi anabasebenzi abaziingcali bamavolontiya abaqeqeshiweyo abamodareyitha zonke iingxoxo.
Iingcamango zokuzonwabisa kwi-Facebook
Uyongeza njani i-Twitter kwiBhlog yakho
Ndiyenza njani iPodcast
Nabani na .... Apho !!!
Nge xinycangcangcala.com (ABT), uyakufumana elinye lamagumbi okuncokola asimahla ahlawulelweyo. Kuya kufuneka ujoyine indawo, uthathe inxaxheba ngokungqinelana ne izikhokelo zengxoxo, kwaye usayine isivumelwano serejista yengxoxo. Iindwendwe kunye neendwendwe azivumelekanga ukuba zifunde, kwaye ukuphuhlisa oosiyazi kunokufunda kuphela xa kukho umodareyitha okhoyo. Ukufundwa simahla engxoxweni yibhonasi yamalungu athatha inxaxheba. I-ABT ayisiyo indawo yokungena kufundo kwangoko. Indawo.com uyinika 4 ngaphandle kweenkwenkwezi ezi-5 malunga nokuphononongwa okungama-20. Omnye umvavanyi uthi: 'Nabani na Apho-ewe, bakho phaya, kwaye kulapho uzakufumana khona iimpendulo.'
Ukuncokola ngokukhululekileyo unikezela ngamagumbi okuncokola kwi-Intanethi apho abantu banokuthetha noosiyazi, abaneshologu, abafundi beetarot, nokuninzi. Injongo yoku kukuvumela ukuba wazi amalungu oluntu kwaye uthathe isigqibo sokuba zeziphi ii-psychics ofuna ukudityaniswa kuzo ukuze kufundwe. Banikezela ngombuzo omnye wasimahla xa ubhalisa kunye nokufunda simahla kwengqondo ukuya kuthi ga kwimizuzu eli-10 xa uqinisekisa ikhadi lakho letyala. Iwebsite ifumana ukuphononongwa okuhle kufacebook.
Tyelela UbuDade obungaqhelekanga , kwaye uyakufumana amacandelo oncedo kunye neengcebiso ngokwasemoyeni kunye nengxoxo jikelele malunga neengelosi, izikhokelo zomoya, iitotems zezilwanyana, inzululwazi ngeenkwenkwezi, ubomi bexesha elidlulileyo, iingcinga zelenqe, imijikelo yokuphilisa, njalo njalo. Uluntu luqhutywa ngamavolontiya, ama-clairvoyants, kunye ne-tarot readers, kwaye uluhlu olubanzi lokufunda lufumaneka mahhala. Ukuxoxa kumodareyithwe kwaye kuyahamba ngokuhamba. Akukho mrhumo; Nangona kunjalo, kuyakufuneka ubhalise ukuze uthumele kwiiforamu nakwiingxoxo. Umsebenzisi ongumDade wooMystic uthi Quora : 'Ndifunde simahla apho kwaye ndibacebisa kakhulu. Ndikwanazo nohlalutyo lwamaphupha lwasimahla olwenziweyo. Ndichukumisekile. '
I-Psychic-Forum kunye neClairvoyant-Forum
I-Psychic-Forum kunye neClairvoyant-Forum 's Ukuphuhliswa komphefumlo liqonga lasekuhlaleni. Kulapha apho uya kufumana iqonga lezengqondo, idesika yoncedo lwengqondo, kunye amagumbi okufundela . Ukufumana ukufundwa, kuya kufuneka Joyina iforum . UPhuhliso loMphefumlo lunalo izikhokelo ezithile , kwaye amalungu enza, amaxesha ngamaxesha, anikezela ngokufundwa simahla kwamanye amalungu, kodwa amalungu kufuneka abe ngaphezulu kwe-18 yokucela okanye yokufumana ukufundwa.
xa umntu we-sagittarius ekuthanda
soul-development.com umfanekiso weskrini wamagumbi okufundela iforum
Ukuncokola kwigumbi labucala
Eyona ndlela yokucinga ngegumbi lokuncokola labucala lasimahla alikho simahla. Zizithuba ezizimeleyo apho unokunxibelelana nengcali yezengqondo ngaphandle kokuba abanye bakho, buza imibuzo, kwaye ubavavanye ngaphambi kokufumana ukufundwa ngasese okuhlawulelweyo. Ewe kunjalo, ukuba ufuna ukufunda ixesha elide, olunzulu lokufunda ngasese, izangoma, njengazo zonke iingcali, zibiza imali.
Ukufikelela kwengqondo unabafundi abakhulu kwaye unika ingxoxo yasimahla yemizuzu emi-6 (kwigumbi labucala). Ukufikelela kwi-Psychic kufuna ukuba abasebenzisi babo babhalise. Emva kokuba ubhalisile, baya kunika umthengi omtsha ukufundwa kwemizuzu emi-6 yasimahla. Akukho sidingo sokufaka ikhadi lakho letyala kwaye ngenxa yolo lodwa, ukufikelela kwiPsychic kufanelekile ukuba ujonge. UPhononongo lwePsychic kwi-Intanethi yinike inkwenkwezi ye-3.5 (ngaphandle kwe-5) yokulinganisa malunga nokuphononongwa okungama-70.
ungasebenza kwi-mcdonalds kwi-14
Nge Oranum , ubhalisela ubulungu basimahla kwaye emva koko uncokole simahla kunye nogqirha okoko ufuna. Ithemba lokuba uya kuyithanda i-psychic ngokwaneleyo ukuba ubhatalele ukufunda. I-Oranum ibonelela ngengxoxo yasimahla yevidiyo. Nangona kunjalo, ukuba awunayo okanye ukhetha ukungayisebenzisi ikhamera yewebhu, usenokufumana ukufundwa simahla ngokuchwetheza imibuzo yakho kwibhokisi yencoko. UPhononongo lwePsychic kwi-Intanethi inika i-Oranum ireyithingi yeenkwenkwezi ezi-3 kunye nohlolo olungaphezulu kwama-50.
Ukudibana neOranum, Uphawu lwePsychic yinkonzo yengqondo enika iingxoxo zamahhala ze-psychic kunye neengqondo, abafundi be-tarot, i-clairvoyants, i-empaths kunye nokunye. Ungabhalisela simahla kwaye uthethe ngengqondo ngokuncokola kwi-Intanethi okanye ngencoko yevidiyo.
Umthombo weengqondo ibikho ngaphezulu kweminyaka engama-25 kwaye ibonelela ngokufundwa kwengqondo ngokuphila ngengxoxo ye-Intanethi. Ukuze usebenzise iinkonzo zePsychic Source, kuya kufuneka bhalisa kunye nemizuzu yokuthenga, emva koko imizuzu yakho yokuqala yokuqala isimahla. Umthombo weengqondo ifumana amanqaku eenkwenkwezi ezi-5 nangaphezulu kohlolo lwabathengi olungaphezulu kwama-350 oluvela kuPhononongo lwePsychic kwi-Intanethi.
Ungaxoxa ngokukhululekileyo imizuzu emithathu ngo Kasamba.com Kwiwebhusayithi okanye kwiapp yabo, kodwa kube kanye. Kuya kufuneka ubhalise kwiwebhusayithi kaKasamba, kodwa ukubhalisa kulula; khetha nje i-psychic, cofa ukuze uxoxe, kwaye uya kuhamba kwinkqubo yobhaliso. Nge-app, ukhetha i-psychic, faka ulwazi lwakho lokuhlawula, kwaye uya kuhlawuliswa kuphela xa uncokola ngaphezu kwemizuzu emithathu. Insiza iyafumaneka kwi Dlala kuGoogle okanye kwi iTunes . Ukuthenjwa inika uKasamba amanqaku eenkwenkwezi ezi-4.
Zininzi iingozi kwi-intanethi, yiyo ke loo ntokungcono ukuba ukhuseleke kunokuba uxolise. Ukuya kufunda ngokusebenza kwengqondo, kunokuba nzima ngakumbi kwigumbi lokuncokola elinengqondo ukuze wazi ukuba ngubani oyinyani kwaye ngubani ongekhoyo. Ke ngoko, kubaluleke ngakumbi ngakumbi ukuba wazi amagumbi egumbi lokuncokola, ukuze wazi abathathi-nxaxheba bengxoxo, kunye nokwabelana ngolwazi oluncinci lobuqu kangangoko unakho. Nangona kungafuneka uveze ulwazi lwakho lomntu xa ubhalisa, amagumbi okuncokola esidlangalaleni akuvumela ukuba unxibelelane noosiyazi okanye abanye abathatha inxaxheba ngelixa bengazichazanga igama.
Ukuthandana Tips Ukutya Kukutya Safe Pranks And Practical Jokes Ukuthandana Imiboniso Yesilayidi Ngaphakathi Design Basics
indlela yokususa amatye emhlabeni
ungajongana njani nokuba ungunyango
ungafumanisa njani ukuba umntu ubhubhile
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana isatifikethi sokufa eCalifornia
uyicoca njani ityali ekrwada
Umatshini ojikelezayo omhlophe ojikelezayo